Ciidamada DKMG iyo Shabaab oo ku dagaalamay Luuq | raascasayrmedia.com
← Tacsi ka timi Jaaliyadda Reer Puntland ee Italy
Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday xarumo ay ciidamada DKMG ah kala wareegeen Xarrakatul Shabaab →
May 28, 2011 · 7:24 pm
Ciidamada DKMG iyo Shabaab oo ku dagaalamay Luuq
Dagaallo xooggan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabaab ayaa xalay ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Dagaalkaani ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamo ka tirsan Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda KMG ah ay ku leeyihiin duleedka iyo gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Ciidamada Xarakada Al Shabaab ayaa la sheegay in dagaalka ka hor tiro Madaafiic ay ku gaareen gudaha degmadaasi, waxaana intaasi kadib bilaawday dagaal culus oo fool ka fool oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Xarakada Al Shabaab kaasi oo gaystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la’ogyahay hal ruux ayaa ku dhintay labo kalana way ku dhaawacmeen kuwaasi oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay, waxaana si dhab ah ilaa iyo iminka aan loo ogayn qasaaraha ka dhashay Madaafiicdii Ciidamada Shabaab ay ku gaaraaceen gudaha degmada Luuq.
Diyaad Cabdi Kaliil oo ka mid ah Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo ay Shabelle la xiriirtay ayaa waxaa uu sheegay in dagaalkaasi uu san ahayn mid sidaasi u buuran islamarkaana ciidamada Shabaab qorshahooda uusan ahayn inay meel qabsadaan balse wuxuu tibaaxay inay doonayeen oo kaliya in qalalaaso ay ka dhex abuuraan degmadaasi.
Arintaani ayaa waxaa ay imaanaysaa iyadoo mudooyinkii dambe deegaanada ka tirsan gobolka Gedo ay ka jireen dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo xiisado colaadeed oo u dhaxeeya ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabaab, waxaana deegaanadaasi ka mid Degmada Ceel-waaq, Buurdhuubo iyo deegaanka Buusaar oo shacabkii ku dhaqnaa halkaasi qaarkood ay isaga barakaceen kadib markii ay ka cabsaadeen xiisado kasoo cusboonaaday deegaanadaasi.